Gaari Shacab oo ay saarnaayeen 24 ruux oo lagu qarxiyay Balcad | KEYDMEDIA ONLINE
Gaari Shacab oo ay saarnaayeen 24 ruux oo lagu qarxiyay Balcad
Gaari shacab oo ay saarnaayeen 24 ruux ayuu qarax miino ku helay meel wax yar u jirta degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe.
BALCAD, Soomaaliya - Gaari Caasi ah oo ay saarnaayeen 24 ruux oo shacab ah kana ambabaxay magaalada Muqdisho kaasoo ku sii jeeday magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa miino kula qaraxday inta u dhaxeyso Tuulada Gololeey & degaanka Qalimow ee degmada Balcad, gobolka Shabeelaha dhexe.
Gaarigan oo ay saarnaayeen 24 ruux oo dhammaantood shacab ahaa ayaa waxaa la sheegay inay wax ku noqdeen, waxaana lagu soo warramayaa in dhammaan dadkaasi ay qaarkood ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen marka laga reebo afar ruux oo ka badbaadday.
Wararka hordhaca ah oo ay Keydmedia Online ka haleyso goobta Qaraxa ka dhacay, ayaa sheegaya in ugu yaraan 16 oo dad rayid ah ay ku dhinteen.
Qaraxa ayaa ahaa miino dhulka lagu aasay, taasoo inta badan ay waddadani caan ku tahay, waxaana dhowr jeer oo hore ay miino kula kacday isla deegaankan, iyadoo dhowr mar oo hore lala beegsaday gawaari ciidan oo halkaa marayay.
Dadkii ku dhintay maydadkooda ayaa lagu wadaa in halkaasi lagu aaso iyadoo dadkii ku dhaawacmay halkaasina loola cararay isbitaallada ku yaal magaalada Jowhar.
Weerarrada nuucan oo kale ah waxaa fuliya oo lagu yaqaan kooxda Al-Shabaab ee dagaalka xooggan kula jirta dowladda Soomaaliya, inta badana qaraxyada nuucan oo kale ah markii ay dhacaan wey ka aamusaan, qaraxyada lala eegto ciidamadana isla markii uu dhaco ayey sheegtaan. Mana muuqato cid wax ka qabaneysa iyo maamul awood leh oo ubacabac dhigi kara kooxdan Al-Shabaab.
Madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay maraan hawada markii ay rabaan in ay u kala safraan Muqdisho iyo Jowhar, hayeeshee dadka shacabka ah ee noloshooda ku xirantahay ganacsiga ee caanaha iyo alaabaha kale ee muhiimka ah usoo suuq geeya magaalada Muqdisho dibna ugu laabta gobolka Shabeelaha dhexe waxay isticmaalaan waddada.